June 2019 – News Portal
असार १५ः अभावमा किसान
June 30, 2019 epradeshLeaveaComment on असार १५ः अभावमा किसान
घोराही, १४ असार । असार १५ सरदर यो मितिसम्म किसानहरुमा खेतीपातीको चटारो बढी हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि आजको धान दिवस किसानको तयारी पनि त्यस्तै हुनुपर्ने । तर दाङका किसानहरु अभावै–अभावमा रहेका छन् । पर्याप्त रुपमा मल, सिंचाई र बीउ उपलब्ध नहुँदा किसानहरु अभावको अवस्थामा छन् । सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । कृषकलाई अनुदान, सर्वसुलभ मल तथा […]
June 30, 2019 epradeshLeaveaComment on हाम्रो बानी र नगरको सरसफाई
हामी करोड पर्ने घरमा बस्छौं, तर फोहोर घरै अगाडि फाल्छौं । उल्टो सफा गरिदिएन भनेर नगरपालिकासँग गुनासो गरिरहन्छौ । आफै व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहर पनि व्यवस्थापन गर्दैनौं । सार्वजनिक ठाउँको बाटो मिच्छौं । चाउचाउ खाँदै हिड्छौं, सकिएपछि प्याकेट सडकमै फालिदिन्छौं । पानी पिउँछौं, बोतल सडकमै फालिदिन्छौं । जेब्राक्रसिङ छाडेर जथाभाबी बाटो काट्छौं । सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती र चुरोट खान्छौं । यस्तो व्यवहारले अरुलाई […]
June 30, 2019 epradeshLeaveaComment on तेघरामा वृक्षारोपण
घोराही, १४ असार । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ९ तेघरामा वृक्षारोपण तथा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिएको छ । बगरलाई वन गराउने गरि डिभिजन वन कार्यालय दाङले घोराही उपमहानगरपालिका–९ तेघराको हापुरखोला बगरमा वृक्षारोपण गरि स्थानीयलाई वन हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीयको सक्रियतामा ५ दशमलव १६ हेक्टर क्षेत्रलाई सामुदायिक वनका रुपमा शनिबार स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका […]
मञ्चको वडास्तरीय समिति गठन
June 30, 2019 epradeshLeaveaComment on मञ्चको वडास्तरीय समिति गठन
तुलसीपुर, १४ असार । तुलसीपुर नगर भूमि अधिकार मञ्चको वडा स्तरीय समिति गठन भएको छ । नगर समितिको आयोजनामा शनिबार भएको एक भेलाले वडास्तरीय समिति गठन गरेको हो । मञ्चका नगर समिति अध्यक्ष तुल प्रसाद खरेलको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ५का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । भेलाले वडा नं. ५ का […]
बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न छलफल
June 30, 2019 epradeshLeaveaComment on बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न छलफल
तुलसीपुर, १४ असार । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ६ लाई यस क्षेत्रकै पहिलो बालश्रममुक्त घोषणा गरिने भएको छ । अबको दुई महिनाभित्र मै बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने गरी तयारी भइरहेको वडा अध्यक्ष नवराज लामिछानेले जानकारी दिए । वडालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्न पहिलो चरणमा घर–घरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गरिएको उनले बताए । यो तथ्यांक अनुसार वडामा १३ जना बालश्रमिक रहेको […]
June 30, 2019 epradeshLeaveaComment on धान दिवसको औचित्य
हरेक वर्षको असारे १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ । कृषि प्रधान देश नेपाललाई कृषिमा चिनाउले उद्देश्य धान दिवसले लिएको छ । हरेक वर्ष धान दिवस मनाइन्छ । तर त्यसको सार्थकताको बारेमा न त बहर हुन्छ न त पुष्ट्याई नै गरिन्छ । सुझाव आउँछ अर्काे वर्षको अवस्था त्यहि नै देखिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिको भाषण कहिलै छुट्दैन । आयातमा […]
‘स्कुल उमेरमै विवाह’
June 29, 2019 epradeshLeaveaComment on ‘स्कुल उमेरमै विवाह’
तुलसीपुर, १३ असार । शान्तिनगर गाउँपालिका–२ बाघमारेका ९ कक्षामा पढ्ने एक विद्यार्थीले गत वर्ष मंसिरमा १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरे । आफ्नै उमेरकी केटी भगाएर विहे गरेका उनको नवदम्पत्ति शुरुमा त एक÷दुई महिना राम्रै बित्यो । परिवारले पनि उनीहरुलाई स्विकार गरेर तामझाम र धुमधाम साथ विहे गरिदिएको थियो । विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालक र पढ्दै गरेकी बालिकाको सानै उमेरमा […]
जनप्रतिनिधिको गिट्टी जिन्दगी
June 29, 2019 epradeshLeaveaComment on जनप्रतिनिधिको गिट्टी जिन्दगी
बिगतको दिनमा खोलामा गिट्टी कुटेर गुजारा चलाएकी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ की फुलमति नेपालीलाई हिजोआज कार्यक्रममा भ्याई नभ्याई छ । त्यो पनि जनताको प्रतिनिधि बनेर । सम्मान के हो ? समाज के हो ? बल्ल जीवनको ५०औँ बसन्त पार गरिसके पछि बुझिन उनले । त्यो खोलामा गिट्टी कुट्ने मजदुर महिला अनि आजको जनप्रतिनिधि हुँदाको फरक । जो कल्पना […]
June 29, 2019 epradeshLeaveaComment on दाइजो
आज त ठूलीको विहे छ । एक हप्ता पहिलेदेखि नै हो । उसको घरमा निकै चहलपहल देखिएको । पल्लाघरे ठूली आमै, तल्लाघरे कान्छी बज्यै अनि मेरी ज्यैलाई पनि फुर्सद छैन टपरी खुट्ने, रोटी पकाउने विहेको सामाग्री बनाउने । ठूलीका बाआमा दाजुभाइ पनि निकै व्यस्त देखिन्छन् । व्यस्त पनि किन नहुन त, छोरीको विहे पो हँुदैछ आज । ठूली पनि आफू कसरी […]
कृषि आन्तरिक बजेट ३ करोड
June 29, 2019 epradeshLeaveaComment on कृषि आन्तरिक बजेट ३ करोड
तुलसीपुर, १३ असार । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । जग्गा बाँझो राख्नेहरुलाई कारवाही गर्नेदेखि लिएर डिपवोरिङ सञ्चालनसम्मको कुरालाई समेटिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै आत्मनिर्भर हुन सकिने भएकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताएका छन् । बजेटमा कृषिको समग्र […]